Hay’adda Macdanta & Shidaalka Puntland Digniin Soo Saartay – SBC
Hay’adda Macdanta & Shidaalka Puntland Digniin Soo Saartay
Posted by SBC Editor on Agoosto 5, 2015 Comments
1 Hay’adda Macdanta iyo Shidaalka Puntland, waxaa ay ku boorineysaa Golaha Fulinta Dawladda Federalka Somaliyeed iyo Wasaaradda Macdanta iyo Shidaalka Muqdisho in ay joojiyaan sharciga Shidaalka ee ay hordhigeen Golaha Fulinta Dawladda Jumhuriyadda Federalka Somaliyeed, bishan August 2deedi, 2015, sababaha soo socda dartood.
2 Sharcigaan oo si sharci daro ah loo soo qoray, ma waafaqsan Axdiga qarameedka hada jira. Sidaas darteed, Dawladda Puntland ma aqbalidoonto sharcigaas maadama aan lagu wadda heshiin, laga wadda tashan, ay samaysay Wasaarad si sharcidaro ah ku dhisan, sharcigaas oo ay rabaan in ay ka gudbiyaan Golaha Xeer Dejinta oo Aqalka Sare weli maqan yahay, iyo weliba, Golaha Fulinta iyo Golaha Xeer Dejinta oo aan arinka awood sharci u lahayn.
3 Axdiga ku meelgaarka ah ee Jamhuriyadda Federalka Somaliyeed ee la sameeyey 2012kii ma siin Dawladda Jamhuuriyada Federalka Somaliyeed iyo Golaha Xeer Dejinta Jamhuriyada Federalka Somaliyeed awood sharci oo ay ku sameeyaan shuruuc khusaysa arimaha khayraadkada dabiiciga ah, amaba shidalka iyo macdanta Somaliya. Waxaa amuurtaasi ku cadahay Qodobada 45 iyo 55 ee Axdiga kumeel gaarka ah ee Jamhuriyada Federalka Somaliyeed.
4 Hay’adda Macdanta iyo Shidaalka ee Puntland waxaa ay ogtahay in sharcigan cusub ee qabyada ah ay dabada ka riixaayaan shirkado shisheeye, sida Soma Oil and Gas, iyo kuwo kale oo halmaala oo doonaya in ay si xaaran ah ku qaataan heshiisyo cusub, amaba lagu xalaaleyo heshiiskii hore ee ay Dawladdu la gashay shirkada Soma Oil and Gas oo iyadu lacag ay leedahay ku dhisatay Wasaaradda Macdanta iyo Shidaalka Muqdisho. Shirkada Soma Oil and Gas oo si sharcidaro ku heshay heshiiska ay hada haysato ayaa waxaa lagu wadda baaris caalami ah, baaristaas oo khusaysa musuqmaasuq.
5 Baaritaanka lagu wado shirkadda Soma Oil and Gas ayaa waxaa saldhig u ah in laaluush iyo hab musuqmaasuq ah lagu siiyey heshiiskaa ay hadda la wadaagto Dawladda Jumhuriyadda Federalka Somaliyeed. Sidaas darted, Hay’adda Macdanta iyo Shidaalka Puntland waxaa ay Dawladda Federalka ah ku boorineysaa in ay ka baxdo heshiiska ay hadda la wadaagto Shirkada Soma Oil maadaama shirkadaas uu ku socdo baaritaanka khusaya Laaluush iyo Musuqmaasu ay bar ka tahay Wasaarada Macdanta iyo Shidaalka Muqdisho ee Dawladda jamhuriyadda Federalka Somaliyeed.
Hay’adda Macdanta iyo Shidaalka Puntland
Ciise Maxamud Farax
Faafin: SBC International.